EX - ABSDF: October 2013
နာမည် အရေးကြီးသည်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်နာမည်ကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စွမ်းအင်များ မပြုန်းတီးစေဖို့ အလွန်ပဲ အရေးကြီးလှသည်။ ကိုယ့်နာမည်ကိုယ် မှည့်ချင်သလို မှည့်လို့ရသည် မှန်သော်လည်း ဘေးဘီလောက ကို အားနာရမည်။ Read more »
၈၈ တောခိုကျောင်းသားများ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ABSDF သေ့ဘောဘိုးစခန်းဖြစ်ရပ်မှန်များ - မိုးတိမ် (သေ့ဘောဘိုး) ၁၀.စာအုပ်စဉ်ပြတိုက်
စာအုပ်အမည် - ၈၈ တောခိုကျောင်းသားများ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ABSDF သေ့ဘေဘိုးစခန်းဖြစ်ရပ်မှန်များစာရေးသူအမည် - မိုးတိမ်(သေ့ဘောဘိုး)စာအမျိုးအစား - သမိုင်း(နိုင်ငံရေး)၊မှတ်တမ်းDownload -- http://hngetngaimrokhimisistory.blogspot.com/2013/10/absdf.html
" တို့တိုင်းပြည်မှာ မအောင်မြင်တဲ့ စီမံကိန်းတွေကြောင့်သာ ထောင်တန်း ကျရရင် တို့ရဲဘော်တွေ တစ်ယောက်မှကျန်မှာ မဟုတ်ဘူး . . မင်းပူမနေနဲ့ . . "
ညွှန်ချုပ်နဲ့ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုး နှစ်ဦး ရယ်ရယ်မောမောပြောနေကြတာ နားထောင်ပြီး မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ငိုချင်သလို ဖြစ်ခဲ့ရတယ် . . . DG ကစပြောတယ် . .
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဆောင်းပါးများ Tue Oct 29, 2:20 pm ပုစ္ဆာငါးရပ် “ခုတစ်လော ခင်ဗျားကို သဲကြီးမဲကြီး ပြန်ဆော်နေကြပြန်ပြီနော် …။”
သတင်း စာ၊ ဂျာနယ်များတွင် ခပ်စိပ်စိပ် တွေ့လာရသော၊ အရေးအသား တွေနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိတ်ဆွေတစ်ယောက်၏ မှတ်ချက် ဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူ ဘာမှ ပြန်မဖြေခဲ့ပါ။ သူ့စကား အသုံးအနှုန်းတိကျပုံ ကိုတော့ သဘောကျသွားသည်။ အထူးသဖြင့် “ခုတစ်လော” ဆိုသည်နှင့် “ပြန်” ဆိုသော ကြိယာဝိသေသနများ …။ ဟုတ်သည်ကော …။ စာရေးသူအနေနှင့် ဝေဖန်ရေး အမည်ခံ အပုပ်ချပွဲများနှင့် ကြုံရသည်မှာ တစ်ကြိမ်မှ မကတော့ဘဲ …။
တပ်မတော်ကိုဖြိုခွဲနေသော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ဆောင်းပါးရှင်။
သွေးသောက်သစ္စာဂတိပြု ကာပြည်သူ၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် စနစ်တကျအမျော်အမြင်
ပြဌါန်းကာ ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။ Read more »
အာဏာရမှသာ တိုင်းပြည်ထူထောင်နိုင်မယ် ၊ ဒီမိုကရေစီ ထူထောင်နိုင်မယ်ဆိုတာ အာဏာနိုင်ငံရေး အယူအဆ သက်သက်သာဖြစ်တယ် ။ ဒီမိုကရေစီ စံနစ်ဆိုတာ အာဏာရှင်စံနစ်လို တဦးတယောက်ထဲက အာဏာ လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားနိုင်ခွင့်မရှိဘူး ။ Read more »
"မလေးရှားနိုင်ငံ၏ သမိုင်းဖြစ်ရပ်များနှင့် မလေးရှားရောက် ဗုဒ္ဓသာသနာတော် သမိုင်း" (ဗဟုသုတ ရစရာတွေ၊ အတုယူဖွယ်ရာတွေ၊ သတိထားကာ သံဝေဂ ရယူဖွယ်စရာတွေနဲ့ ပြည့်ညက်ကြပ် သပ်နေတဲ့ ရှေးရှေးတုံးက မလ္လာယုနိုင်ငံတော်)ကို ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြပါ။ Read more »
နိုင်ငံရေးအိုင်ဒီရော်လော်ဂျီများအား Linear Spectrum သဏ္ဍာန်ဖြင့် ခွဲခြားလေ့လာခြင်း
September 12, 2013 at 3:16am
စကားလုံးကို (၁၈) ရာစုနှောင်းပိုင်းမှာ ပြင်သစ်ပညာရှင် Antonie Destutt de
Tracy က Eléments d'Idéologie ဆိုတဲ့ ပရောဂျက်မှာ စတင်အသုံးပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ De Tracy က အိုင်ဒီရော်လော်ဂျီဆိုတာကို အတွေးအခေါ်များ၏ သိပ္ပံ (science of ideas) အဖြစ် ညွှန်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဇီဝဗေဒ (ဘိုင်အိုလော်ဂျီ) ကဲ့သို့သော သိပ္ပံပညာရပ်တခုအဖြစ် အိုင်ဒီရော်လော်ဂျီ ဆိုတဲ့ သိပ္ပံပညာရပ် ပေါ်ထွက်လာစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။
October 26, 2013 | Hits:752
Share on email ဒီမိုကရေစီ အဆင့်ဆင့်ပြ မြေပုံ
စစ်အေးခေတ်လွန်ကမ္ဘာဟာ စပ်ကျားနိုင်ငံရေးစနစ် (Hybrid Political Regime) တွေ အပြိုင်းအရိုင်း ပေါ်ထွန်းလာမှုကို မြင်တွေ့ရတယ်လို့ ပြောစမှတ် ပြုကြပါတယ်။ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ အာဖရိကတိုက် နိုင်ငံအတော်များများ (ဂါနာ၊ကင်ညာ၊ မိုဇမ်ဘစ်ခ်၊ ဇမ်ဘီယာ၊ ဇင်ဘာဘွေ)၊ ကွန်မြူနစ်ခေတ်လွန် ယူရေးရှား (အယ်လ်ဘေးနီးယား၊ ခရိုအေးရှား၊ ရုရှား၊ဆားဗီးယား၊ ယူကရ်ိန်း) နဲ့
၁၉၄၅ မှာ မွေးဖွားပြီး၊ ၁၉၆၀ မှာ အိန္ဒိယကို မိခင်ဖြစ်သူ သံအမတ်ကြီး (မြန်မာ့ပထမဆုံး အမျိုးသမီး သံအမတ်ကြီး) ဒေါ်ခင်ကြည်နဲ့ ပါသွားတဲ့အတွက် မြန်မာပြည် နဲ့ ဝေးသွားပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကို ၁၉၈၈ မှာ မိခင် နေထိုင် မကောင်းလို့ ပြုစုဖို့အတွက် ပြန်လာ ခဲ့ပြီးနောက်မှာ ဒီကနေ့အထိ ကမ္ဘာကျော် မြန်မာ့အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးသမားနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်လ် ဆုရှင်အဖြစ် နေထိုင်လျက် ရှိပါတယ်။
Hlaing Bwa Maung shared MyanmarDaily.net's photo.
ဟင်း,,, စိတ်ညစ်ပါတယ်ဗျာ ,,
ကျုပ်မလဲ အသက်ကြီးမှ ဒင်းတို့ အတွက် စိတ်ကပူနေရသေး ,,
ဝိုက် ထားသမျှလေးနဲ့ အေးအေးလေးထိုင်စား,,
စည်းစိမ်လေး ခံမလား အောက်မေ့တယ်,,
ခုတော့,, တွတ်ပီတောင် ဇိမ်နဲ့ မဖတ်ရ ,,
ကျုပ်စား နေကျ နတ်သုဒ္ဓါလေး,, ဒင်းတို့ကို တစ်လှည့်ပေးကျွေးပါတယ် ,,
နေပြည်တော်သတင်းရပ်ကွက်မှ အရေးကြီးသတင်းတစ်ခု ပို့လာပါသည် ၊ဦးသန်းရွှေ တစ်ယောက် ညဘက် သန်းခေါင်ကျော် အချိန်လောက်ဆို အသံနက်ကြီးဖြင့် ထထအော်နေခြင်းဖြစ်သည် ၊ အားလုံးအိပ်နေသည့် အချိန်ဖြစ်သဖြင့် အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသော အသံဖြစ်နေသည် ၊ ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေည မှ စတင်ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်သည် ၊
အသစ်ရေးဆွဲသင့်သလား။ သည်ပြဿနာ အခုတလောမှာ ရှေ့တန်းရောက်လာသည်။ တချိန်တည်းတွင် အသစ် မရေးဆွဲသင့်ကြောင်း၊ အသစ်ရေးဆွဲလျှင် အန္တရာယ် သိပ်ကြီးကြောင်း နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် နှပ်ကြောင်းပေး ခြောက်လှန့် လာသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။
နို့ဖိုး ဒုက္ခသည်စခန်း ….. ပတ်ပတ်လည်မှာ
တောင်ကုန်းတောင်တန်းတွေ ဝန်းရံထားသော တောင်ပေါ်မြေပြန့်နေရာလေးတခု။ ထိုင်းနိုင်ငံ အတွင်းပိုင်းနဲ့ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ဆက်သွယ်ထားသော ကားလမ်းနံဘေးမှာ တည်ရှိသည်။ ကားလမ်းပေါ် သွားရင်း ကြည့်လိုက်ပါက စခန်းအဝင်မှာ တောင်မြေကြားက စိမ့်ထွက်ရေများ ရစ်ခွေစီးဆင်းနေသော စမ်းချောင်းလေးတခု တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး…
မျက်နှာဖုံး အထူးဆောင်းပါး (Cover Story, Special Feature) အဖြစ် ယနေ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ပါသည့် ကျွန်တော်၏ " မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးနှင့် ကျွန်တော့်ဘဝ တစိတ်တဒေသ" ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်းဆောင်းပါး ဒုတိယပိုင်းကို ဒီနေရာမှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Read more »
မူဆလင် ဆန့်ကျင်ရေးဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ကြီးမားတဲ့ခြိမ်းခြောက်မှု - ကင်တာနား မြစ်ကြီးနား၌ ခြိမ်းခြောက်ငွေတောင်း၊ ဖားကန့်၌ လက်နက်ငယ်ဖြင့်ပစ်ခတ်
http://myanmarthway.blogspot.com/2010/09/blog-post_8287.html မှ ....
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာ အလွန်သင့်မြတ်လှတာပဲ။ တော်ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ စကားပြောတဲ့ အခါမှာ မိုင်လော့ဒ် (My Lord) ဆိုတာ ထည့်ပြောရပါတယ် ဗိုလ်ချုပ်။
မိုင်လော့ဒ်ဟာ စာပေမှာ ရေးဖတ် ရပေမယ့် ပြောတဲ့အခါမှာ မလော့ဒ် ဖြစ်သွားပါတယ်။ သာမန်လူချင်း ပြောရာမှာ မူရင်းက How do you do (ဟောင်း ဒူး ယူ ဒူး) ဖြစ်ပေမယ့် စကားပြောတဲ့အခါ ဟောင်းဒယူဒူ လို့ အသံနိမ့်နဲ့ ပြောရပါတယ်။
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကို ဥပဒေနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် အချိန်မရွေး လာရောက် စစ်ဆေးနိုင်ဟု သူရဦးရွှေမန်း ပြောပြီ
အောက်တိုဘာလ(၂၅)ရက်နေ့ ထုတ် M Plaza Shopping Journal - Vol 1 , No 20 အောက်တိုဘာလ(၂၅)ရက်နေ့ ထုတ် Auto World Journal အတွဲ-2၊ အမှတ်-40 အောက်တိုဘာလ(၂၄)ရက်နေ့ ထုတ် အားကစားမြင်ကွင်း ဂျာနယ် အတွဲ-၂ ၊ အတွဲ-၄၂
အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်အကြောင်းရေးသားထားသော “မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးနှင့် ကျွန်တော့်ဘဝ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ” ဆောင်းပါးကို ကြာသာပတေးနေ့ အပတ်စဉ်ထုတ် ရန်ကုန်တိုင်းမ်ဂျာနယ်မှာ မျက်နှာဖုံး အထူးဆောင်းပါး (Cover Story, Special Feature) အဖြစ် ယနေ့ ၂၀၁၃
ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့မှစတင်ပြီး အပတ်စဉ်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ကြောင်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အင်္ဂလိပ်စကားပြောခြင်း - သခင်တင်ဦး တို့ဗမာအစည်းအရုံး Dobama Asiayone's photo.
"မင်း အိုင်စီအက်စ် (ICS) ဦးတင်ထွဋ်